जनवरी १८ लाई इन्टरनेटमा कालो दिनको रुपमा मनाइएकोछ ! “पाइरेसी रोक्न” अर्थात “स्टप अनलाइन पाइरेसी” (Stop Online Piracy Act –SOPA) “सोपा” नामक विधेक अमेरिकी संसदले “पास” गर्न लागेका कारण, इन्टरनेटका हजारौँ साइटहरुले, “सोपा” को विरोध गर्दै उक्त दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाएका थिए ! विरोध स्वरुप विकिपेडिया, रेडिट, बोइबोइङ लगायतका साइटहरुले आफ्नो पेजलाई कालो बनाएका थिए भने अन्य हजारौँ साइटहरुले “स्टप सोपा” सहितका व्यानर आफ्नो साइटमा राखेका थिए !
इन्टरनेटका कारण गितसंगित, चलचित्र लगायतका कुराहरुको पाइरेसी बढिरहेको कुरामा दुइमत नहोला ! यसर्थ अमेरिकी सरकारले ल्याउन लागेको कुरा, “पाइरेसी” का विरुद्ध भनेकाले राम्रो झैँ देखिएपनि, यथार्थमा यो नियम लागु भएको खण्डमा प्राय सबै साइटहरु बन्द हुनेछन् ! साइटहरु बन्द भएको खण्डमा इन्टरनेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त, हिजो गरिएको “इन्टरनेट ब्ल्याकआउट” ले पनि प्रस्ट पारेकोछ ! खोजेका सबै कुराहरु पाइने, विकीपेडियाका पेजहरुमा हिजो केही भेटिँदैन थियो ! बोइङबोईङ नेट, वायर्ड म्यागजिनहरुमा लेखिएका कुराहरु पढ्न पाइएको थिएन ! सोपा लागु भएको खण्डमा, विकिपेडिया, फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता साइटहरु पनि चल्न पाउनेछैनन् ! अत: यही सोपा/पिपा नामक विधेकहरुको विरोधमा विकीपेडिया लगायत सयौँ साइटहरुले हिजो विरोधस्वरुप इन्टरनेट ब्ल्याकआउट गरेका थिए ।
सोनी, सिबिएस र हलिउडका मनोरञ्जन उद्योग आदि केही कम्पनीहरु सोपाको पक्षमा रहेपनि गुगल, फेसबुक, ट्विटर, विकीपेडिया, रेडिट लगायतका ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीहरु ‘सोपा’को विपक्षमा रहेकाछन् !
नेपाली समयअनुसार हिजो बिहान १०:४५ देखि इन्टरनेटमा “ब्ल्याक आउट” सुरुभएको थियो ! “इन्टरनेट ब्ल्याक आउट” हुँदा विकिपेडिया, गुगल कस्तो चाँही देखिँदोरै’छ भनेर जान्ने कौतुहलता थियो ! अत: आफ्नो घडिमा १०:४५ हुने बित्तिकै विकिपेडिया र गुगल हेरेँ ! विकिपेडियाको पेज कालो बनाइको रहेछ भने, गुगलले चैँ सर्चबक्स तल 'प्रयोग कर्तालाई सोपाको विपक्षमा साइन गर्न अनुरोध गरिएको रहेछ! आफ्नो ट्विटर चलाउने बानी भएका कारण तत्काल दुईवटा ट्विट गरेँ, पहिलो विकिपेडियाको बारेमा, दोस्रो गुगलको बारेमा !
ट्विट गरेर आफ्नै धुनमा काम गर्न लागेँ ! एकछिन पछि हेर्दा, मेरो ट्विटरक्लाइन्ट “सिल्भर बर्डमा” धेरै मेन्सनहरु देखाइरहेको थियो ! धेरै मेन्सन आएको देखेर चकित पर्दै मेन्सन हेरेँ, छक्क परेँ, गुगल बारेको मेरो ट्विट त धमाधम रिट्विट भइरहेको रहेछ । हेर्दा हेर्दै आधा घन्टा भित्र नै सय पटक भन्दा धेरै रिट्विट भयो, आफूलाई अचम्म पनि लाग्यो, खुशी पनि लाग्यो ! तत्काल केही साथिहरुलाई ट्विटरमा म्यासेज पनि पठाएँ ! आफू काममा व्यस्त भएँ, सिल्भरवर्डमा नोटिफिकेसनहरु आएको आएकै थियो !
Google suggest users to Tell Congress: "Please don't censor the web"! bit.ly/dbsyrl"End Piracy, Not Liberty"#SOPA #PIPA
— Aakar Anil (@aakarpost) January 18, 2012
अफिसबाट घर फर्कने बेला, आफ्नो ट्विट फेरि हेरेँ ! रिट्विट भइरहेको थियो, अचम्म मान्दै मनमनै खुशी हुँदै घर फर्केँ ! बाटोमा मोबाइलबाट पनि हेरेँ, यतिन्जेल “टप ट्विटस्”ले मेरो त्यो ट्विट ‘फेवरेट’ पनि गरिसकेको रहेछ ! ‘टप ट्विट्स’ ले फेवरेट गरेका कारण, ट्विट धेरै पटक रिट्विट भएको कुरामा त शंका रहेन ! अत: आफूलाई निकै नै खुशी लाग्यो, कहिलेकाँही हाम्रा कुरापनि ट्विटरमा परालको आगो झैँ सल्किँदा रहेछन् जस्तो लाग्यो !
सायद मेन्सन अस्ति आएको थियो तर दिउँसो मात्र एउटा मेन्सन हेर्दा थाहा पाएँ, मेरो उक्त ट्विट त ‘टप ट्विट’ नै भएको रहेछ ! अस्ति ‘इन्ड पाइरेसी’ (End Piracy) नामक शब्द विश्वभरी नै १६ घन्टाको लागि ट्विटरमा ट्रेन्डिङ भएको थियो, अनि आज थाहा भयो, उक्त ट्रेन्डिङ टपिकको लागि मेरो ट्विटले महत्वपुर्ण योगदान दिएको रहेछ ! आफ्नो ट्विटको कारण विश्वभरि ‘इन्ड पाइरेसी’ ट्रेन्डिङ टपिक रहेको थाहा पाउँदा खुशी नलाग्ने कुरै भएन, तपाई ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने, ट्रेन्डिङ टपिक के हो भन्न बुझ्न धेरै गाह्रो छैन ! जुन कुरा ट्विटरमा धेरै पटक गरिन्छ, त्यही शब्द नै ट्विटरको ट्रेन्डिङ टपिक बन्छन् ! (‘ट्विटर’को आधिकारिक तथ्याकं नभइ ट्विटरकै ट्विटलाई लिएर अर्को साइटले दिएको तथ्यांकको आधारमा)
ट्विटर चलाउने क्रममा धेरै पटक विश्वमा ठूला ठूला घटनाहरु घटेकाछन् ! तर आफ्नै ट्विटले यति धेरै रिट्विट पाएको, ट्रेन्डिङ टपिक नै बनाएको भने, मेरो लागि पहिलो घटना थियो ! इन्टरनेटमा भएको ठूलो विरोध कार्यक्रमलाई आफ्नो ट्विटले त्यति धेरै रिट्विट पाउनुलाई, मैले सकरात्मक तरिकाले हेरेकोछु ! आज सोच्दा लाग्दैछ, हिजो सही समयमा, सही ट्विट गरेछु ! ट्विटर सही तरिकाले चलाएको खण्डमा, यस्ता कुराहरु पनि हुने रहेछन् भन्ने कुरा हिजोको घटनाले थाहा भयो ! आजलाई यत्ति, बाँकी ट्विटर अनुभवहरु अर्को ब्लगमा लेख्नेछु !
:) August 1, 2012 at 12:03 PM
NKM August 1, 2012 at 12:03 PM
I was going to write: "Aakar ko re-tweet, mero timeline ra SOPA"